Sida loo Beddelaan MP4 in WMA ama MP4 in WMA
MP4 waa qaab caadi ahaan loo isticmaalo in geeyo online. MP4 waxaa si balaadhan looga isticmaalaa in uu kaydiyo video iyo durdurrada audio labadaba. Qaab file waa wax fudud in la sii qulquli video tayo sare leh iyo files audio. Dhinaca kale, WMA waa file maqal ah, gaaban for "Windows Media Audio" taas oo ah been abuurtay Microsoft ah loo isticmaalo in lagu sii qulquli iyo badbaadin files audio Tifaftirayaasha. Sicirka magdhow sare iyo sidoo kale tayada codka weyn oo tirada file yar ayaa ka caawiyay qaab faylka qoraysaan barta in industry ee.
Maqaalkani waxa uu sharaxayaa sida sahlan waa in loogu badalo MP4 in WMA (ama MP4 in WMA) qaab iyadoo la isticmaalayo kaliya labo ka mid ah qasabno.
Part1: Best MP4 in WMA Converter for Windows / Mac
Part2: MP4 Free in WMA (MP4 in WMA) Video Converter
Part3: Extended Knowlege u WMA
Wondershare Video Converter Ultimate ayaa hogaaminaya liiska oo ka mid ah qalabka video Converter ugu waxtarka badan ee dhowr sababood. Barnaamijka ayaa waxaa ka go'an in loogu badalo audio iyo video files labadaba (video in video, audio in audio iyo video in audio). Waxaa la iman tiro balaadhan oo ah isku-dhafan fursadaha iyo qalab loogu talagalay in lagu caawiyo beddeli goobaha aad file muuqan. Waxaa ka mid ah goobaha aad bedeli waa mugga, xawaaraha, dhalaalka, iyo duwan iyo saturation midabka faylasha aad.
Intaa waxaa dheer, haddii aad raadinayso qalab video tafatir oo u baahan in knowhow farsamo kale ma jiro si fudud kuu ogolaanaya in aad ku darto saamaynta si aad video files siiyo natiijada xirfad ku dhowaad muuqan, Wondershare Video Converter Ultimate waa aalad kama dambaysta ah aad u. Users codsan kartaa saamaynta la yaab leh, masarka screen, ama kala guurka oo u dhexeeya video clips si fudud ay soo jiiday oo iyaga tagtey oo sahlaysa in astaysto sawir kasta, video clip, ama file maqal ah.
Waa maxay sababta aad u isticmaashid Wondershare Video Converter Ultimate?
• Si fudud oo degdeg ah oo beddelaad ah MP4 in la joogo filaayo in aad mobile iyo Console ciyaartoyda
• qaabab 159 multimedia Taageero iyo Beddelaan
• Kuu ogolaanayaa inaad jar, dalagga, ama ku darto Cinwaan in aad MP4 video files
• Gubashada qaabab video inay DVD cajaladaha
• 30x dhaqso
Sida loo Beddelaan MP4 in WMA (ama MP4 in WMA) Isticmaalka Wondershare Video Converter Ultimate
Hoos ayaa looga hadli yihiin tallaabooyinka ku, sida loo badalo faylasha aad ka MP4 in WMA ((ama ka MP4 in WMA)) ayadoo la isticmaalayo "Wondershare Video Converter Ultimate".
Tallaabada 1 file Doorashada
Ka dib marka aad si guul leh u soo bixi ay ku rakiban iyo nuqul ka mid ah Wondershare codsiga:
U hubso in aad ku jirto liiska "Beddelaan".
Halkan waxaad si fudud u soo jiidi kartaa jeedi MP4 (ama WMA) file on interface ka.
Waxa kale oo aad isticmaali kartaa "dari files" badhamada xulashada files talooyin aad u diinta
Marka aad gujisid "Add Files" suuqa kala socda muuqan doonaa.
Dooro faylasha aad rabto in aad si loogu badalo.
Waxaad isticmaali kartaa beddelaad Dufcaddii ama hal file.
Ka dib markii ay doortaan aad file click "Open".
Tallaabada 2 Dooro WMA (Ama MP4) sida qaab saarka la doonayo
Hadda tallaabada xigta ayaa lagu wadaa qaab faylka wax soo saarka aad la doonayo.
Dhinaca midig ee app, furo menu qaab dropdown ah.
Dooro qaab WMA file ah oo ka hooseeya "Qaabka iyo Audio tabs".
Waxaad kaloo isticmaali kartaa fursad u raadinta si toos ah aad qortid qaab la doonayo aad rabto in aad si loogu badalo.
Tallaabada 3 badalo MP4 in WMA (ama WMA in MP4)
Suuqa ayaa kor ku xusan ka muuqan doonaa ka dib markii aad xulan qaab wax soo saarka aad.
Bakaylaha aad ka arki kartaa si faahfaahsan il iyo wax soo saarka file hor inta aanad bilaabin diinta.
Si faahfaahsan codec u muuqataa on gacanta midig.
Waad beddeli kartaa goob adigoo gujinaya dejinta icon.
Bakaylaha waxaad bedeli kartaa tayada file aad wax soo saarka, nooca encoder, heerka yara iwm
Marka aad dhammeysato goob aad u jeclaystay, kaliya riix "Beddelaan" button in la bilaabo hawlaha qaab beddelidda. Wareejinta waxaa uu noqon doonaa habka degdeg ah oo toos ah. File saarka ayaa badbaadiyey in folder caga go'an.
Si loogu badalo videos dhererka buuxa iyo muuqaalada premium kale sida processing degdeg ah, waxaad u baahan tahay inaad iibsato " Wondershare Video Converter Ultimate ".
Haddii aad rabto in aad kaliya ku dhererka full free video Converter kaliya labo ka mid ah waqtiga, Wondershare barayaa a gebi ahaanba bilaash ah oo si buuxda u shaqayso magaca " Wondershare Video Converter Free ".
Waxaad u isticmaali kartaa si loogu badalo ilaa 10 dhererka buuxa, watermark free videos for free.
Sida loo Beddelaan MP4 in WMA (MP4 in WMA) Isticmaalka Wondershare Video Converter Free
The " Wondershare Video Converter Ultimate "iyo" Wondershare Video Converter Free "labaduba waa software kala duwan, laakiin faragelin user labada iyaga ka mid ah oo la mid ah kuwo ku jira. Sidaas for "MP4 in WMA" hawlaha qaab beddelidda fadlan raac tallaabooyinka kor u Wondershare Video Converter Ultimate.
1. Waa maxay WMA?
"WMA" waxaa loo isticmaali karaa in ay tilmaamayso in ay qaab file maqal ah ama codecs audio ay. Guud ahaan "WMA" waxay u taagan tahay "Windows Media Audio". "WMA" iska leh Microsoft oo qayb ka ah Microsoft ee Windows Media technology. WMA waa mid caadi ah oo loo isticmaalo kordhin file maqal ah, isagoo labaad oo kaliya in MP3. WMA waa qaab bixi karo, iyo in lala Microsoft ee Advanced Streaming Qaabka (ASF). WMA optionally kartaa taageero maamulka xuquuqda digital (DRM) isticmaalaan si ay u ilaaliyaan nuqul ka Cajalado midig.
2. Sidee u ciyaaro WMA on Windows iyo Mac?
Habka ugu fudud in la furo file WMA aad kombuutarka daaqadaha ah waa ay laban laab magcaabo ku yaal iyo dooran codsiga default aad rabto in la furo qaab faylka ka. Haddii uusan midna mid ka barnaamijyada lagu rakibay file ka fura, ka dibna aad u baahan tahay si loo soo dajiyo codsi ah in arki kartaa files WMA ah. Windows media player waa codsi ugu caansan taageera files WMA.
Marka la isticmaalayo Mac ah, WMA lagu ciyaari karo WMA software ee sida Music Man. Waxa kale oo aad dooran kartaa in aad ka soo dejisan iyo rakibi qaybaha warbaahinta daaqadaha u Quick Time by Flip4Mac.
3. links ee muhiimka ah
Ka dib waa la xiriir waxtar leh waxoogaa macluumaad faahfaahsan oo
Beddelaan WMA in MP3
> Resource > MP4 > Sida loo Beddelaan WMA in MP4 ama MP4 in WMA